MDC yaVaChamisa Yopesana neMDC yaMuzvare Khupe muAmerica
Kubvumbi 01, 2020
Dare repamusorosoro, reSupreme Court, rinoti VaNelson Chamisa havasi mutungamiri ari pamutemo webato re MDC-T
Zvichitevera mutongo wakapiwa neChipiri nedare repamusorosoro, re Supreme Court, wekuti VaNelson Chamisa havasi mutungamiri ari pamutemo webato reMDC-T, vamwe vanotevera zvematongerwo enyika muZimbabwe vanoti havaoni mutongo uyu uchichinja zvinhu zvakawanda.
Gweta rinoongorora zvematongerwo enyika, VaSilas Chekera, vaudza Studio7 kuti vanoona sekuti zvakabuda mudare repamusorosoro izvi zvichatoita kuti vanhu vanyanye kumira naVaChamisa, vachitizve havaoni sekuti mashandiro emapato aya kunze kwenyika achachinja.
Asi sachigaro weMDC USA, dunhu rebato rinotungamirirwa naMuzvare Thokozani Khupe, VaDen Moyo, vanoti chokwadi chakagara chiri pachena zvekuti zvange zvisingamboda dare redzimhosva nekuti Muzvare Khupe vakatsigirwa nebumbiro remitemo yebato iri.
VaMoyo vati musuwo wakavhurwa kune avo vanoda kudzoka kubato iri kuzoita basa nevamwe.
Hurukuro naVaDen Moyo
Zvichakadaro, sachigaro weMDC North America, dunhu rebato rinotungamirwa naVaNelson Chamisa, VaTawanda Dzvokora, vati hapana chinochinjwa mubato ravo sezvo pasina chine basa chakabuda mumutongo uyu.
VaDzvokora vanoti hurumende inongoda kukonzera mhirizhonga muMDC Alliance pachinhambo chekurwisana nechirwere cheCoronavirus icho vanoti chapinza gumbo munyika.
VaDzvokora vanoti zvinokatyamadza kuti mushure mekuzivisa vanhu kuti matare edzimhosva achambomira kunzwa nyaya mumatare adzo kunze kweidzo dzinoda kunzwikwa zvechimbichimbi, dare repamusorosoro iri, rakaona sezvinokodzera kunzwa nyaya iyi sekuti inyaya inofanirwa kukurumidza kunzwikwa.